Ilaina ny fanovana ny toe-tsaina ho fampandrosoana ny firenena | Primature
Ilaina ny fanovana ny toe-tsaina ho fampandrosoana ny firenena
Mahazoarivo, faha 14 febroary 2020 – Nitohy tao Ambovombe Androy ny dian’ny delegasiona izay notarihin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governementa Ntsay Christian any amin’ny faritra Atsimon’ny Nosy ary nifarana tao amin’ny distrikan’Amboasary Atsimo.
Toy ny fanaony rehefa misy fitsidiham-paritra tahaka izao dia nisy ny fivoriana niarahany tamin’ireo tompon’andraiki-panjakana isan-tsokajiny tao an-toerana.
Nandritra izany fotoana izany no nanomezany toromarika azy ireo mikasika ny asam-pampandrosoana, notsiahiviny ary fa miainga avy amin’ny vinan’ny Filohan’ny Repoblika izay narafitra ho politika ankapoben’ny fanjakana ny asa rehetra. Noho izany tokony ho fantatry ny tompon’andraikitra rehetra eny ifotony izany politika ankapoben’ny fanjakana izany izay fototry ny fampandrosoana miainga eny amin’ny fokontany, ny kaominina, ny distrika, ny faritra ary ny firenena iray manontolo.
Tsy ekena intsony, hoy ny Praiminisitra ny tsy fahafehezan’ny tompon’andraikitra ny asany ka mahatonga ny gaboraraka sy ny tandrevaka ka mitarika any amin’ny fahantrana. Manomboka izao, hoy izy dia tokony hahita vahaolana amin’izay tranga na olana miseho ety ifotony ny tompon’andraiki-panjakana na voatendry izy na olom-boafidy fa tsy hiandry ny fitondrana foibe foana. Izay indrindra no antony ametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy ka anomezana fahefana ireo governora hampihatra ny teti-pampandrosoana eny anivon’ny faritra. Izy ireo rahateo no mahalala ny maharary sy ny laharam-pahamehana amin’ny vahoaka amin’ny fari-piadiadiany. Omena azy ireo ny tetibola sy ny fampitaovana ilain’ny faritra iasany ho fanafainganana ny zotram-pampandrosoana eny anivon’ny faritra.
Notsipihin’ny Praiminisitra ihany koa ny tokony hanovana ny toe-tsaina sy ny fomba fiasan’ny mpiasam-panjakana izay mpiasam-bahoaka mba hamerenena ny hasin’ny asam-panjakana ka anao ho laharam-pahamehana ny tombotsoam-bahoaka fa tsy hijery ny tombotsoany manokana intsony. Mazava hoy izy ny toromarika napetraky ny Filoham-pirenena dia ny hanovana ny tantaran’ny firenena, ka takiana amin’izany ny fahavononan’ny tsirairay hiova ary tokony hanatanteraka ny asany andavan’andro ao anatin’ny fahendrena, ny fahamarinana ary ny fahamendrehana ny mpiasam-panjakana.
Eo amin’izay fanovana takiana izay ihany dia antony mahatonga ny tsy fisian’ny filaminana aty amin’ny faritra Androy sy Anôsy ny firaisan’ireo tompon’andraikitra tendro amin’ireo olon-dratsy. Andraikitry ny rehetra ny famerenana ny fandriampahalemana, tsy ny mpitandro ny filaminana ihany no tompon’antoka amin’izany fa manana andraikitra amin’izany ihany koa ny lafin-tany sy ny fitsarana izay mandrafitra ny “OMC”. Araka izany dia ilaina ny fandrindrana ny asa mba hiverenan’ny fandriampahalemana izay antoky ny fiverenan’ny fahatokisan’ny vahoaka ny fanjakana. Efa maro ireo ezaka ataon’ny fitondram-panjakana amin’ny fampitaovana ny mpitandro ny filaminana saingy ny fandrindrana ny asa no tsy ampy.
Nasian’ny Praiminisitra resaka manokana ny mahakasika ny “kere” na ny tsy fahampian-tsakafo vokatry ny haintany any amin’ny tapany Atsimon’ny Nosy, ka nilazany fa efa mametraka rindran-damina ho fitadiavana vahaolana fohy ezaka ny eo anivon’ny governemanta, eo ihany koa ny vahaolana maharitra mba ho lovain-jafy. Raha ny faritra Androy manokana dia nambarany fa misy paikady maro hapetraka ho fampandrosoana azy, toy ny fanamboarana ny lalana ary ny fananganana fotodrafitrasa maro isan-karazany.
Rehefa nihaona tamin’ny tompon’andraikitry ny Faritra, tao amin’ny distrikan’Amboasary kosa ny delegasiona notarihin’ny Praiminisitra dia nampita ny firarian-tsoa avy amin’ny Filohan’ny Repoblika ho an’ny vahoaka, sy ny toromarika ao anatin’ny zotra vaovao hitondrana ny fampandrosoana ny tenany. Mikasika ny resaka tsy fandriampahalemana dia nitodika manokana tamin’ireo mpikambana ao amin’ny “OMC” ny Praiminisitra, ary notsiahiviny fa ny mpitandro ny filaminana dia fitaovana eo am-pelan-tanan’ny “OMC” sy ny tompon’andraikitry any amin’ny lafin-tany ihany, manao ny asany hatrany ny mpitandro ny filaminana saingy raha misy ny tsy fahatomombanana dia ireo tompon’andraikitra voalaza ireo no tompon’antoka amin’izany, izany hoe ny Lehiben’ny distrika sy ny “Prefets”; satria efa napetraka mazava ny rafitra hitantanana ny resaka fandriampahalemana ary tokony samy hanao ny tandrify azy avy izy ireo. Nomarihin’ny Praiminisitra fa misy toe-javatra mampalahelo mitranga any amin’iny Faritra iny, izay nahazoany tatitra, dia ny tsy fanajana an’io rafitra napetraka io, fa misy mitonona ho tompon’andraikitra amin’ny filaminana ka mibaiko sy mandray fanapahan-kevitra tsy avy amin’ny “OMC”, ary dia tsy azo ekena intsony izany. Nambarany ihany koa fa mbola manjaka any an-toerana ny resaka foko, ka notsipihiny ny tsy tokony hibaikoan’izany intsony ny fiaraha-monina amin’izao vaninandro iainantsika izao. Ary ao anatin’ny resaka fandriampahalemana hatrany, hoy izy, dia mbola ny “Dina” no entina mandamina ny resaka fananan-tany, saingy tsy maintsy mahazo ny fankatoavan’ny Fitsarana vao ampiharina. Nambarany fa ho fanampiana amin’ny fandrindrana ny fitandroana ny filaminana dia hisy “base militaire” hapetraka any amin’iny Faritra iny ary hiantomboka amin’ny herinandro ho avy io ny asa fanorenana.
Nantitranteriny fa matoa izy Praiminisitra mihintsy no midina ifotony miaraka amina mpikambana maromaro ao amin’ny governemanta dia tena hijery akaiky ny fiainam-bahoaka ary hitondra vahaolana amin’ireo olana miseho any amin’ny Faritra. Tsy ekena kosa, hoy izy, ny fandikan-dalàna ary dia handraisana fepetra hentitra izay minia manao izany.
Nohazavain’ny Praiminisitra fa rehefa tomombana ny fandriampahalemana dia afaka mivelatra ny fampandrosoana. Nampahafantariny fa ho avy aty an-toerana tsy ho ela ny Minisitry ny Asa, ny Fampananan’asa, ny Asam-panjakana ary ny Lalàna sosialy, sy ny minisitry ny Rano, ny Fidiovana ary ny Fandiovana, ny minisitry ny Fambolena, ny Fiompiana ary ny Jono, ny minisitry ny Mponina, ny Fiarovana ara-tsosialy ary ny Fampiroboroboana ny Vehivavy, hijery manokana ny lafiny fampandrosoana mba hahafahana mamaha ny olana izay mianjady amin’ny vahoaka. Nomarihiny koa fa efa miharatsy ny fiantraikan’ny fiovaovan’ny toetr’andro ka manamafy ny tsy fisian’ny rotsakorana izay mampitombo ny Kere, ka tafiditra ao anatin’ny iraka hampanaovina an’ireo minisitra ny fijerena an’izany.
Nambarana fa ny filoham-pirenena dia efa nametraka mazava fa tsy maintsy mandroso ny any Atsimo, ary ny governemanta dia mametraka ny paikady fa anjaran’ireo mpitondra amin’ny Faritra no mifanome tanana amin’ny fanatanterahana ny asam-pampandrosoana.
← Fitsidihana ny faritra Atsimon’I Madagasikara
Nankahery sy nitondra fanampiana ho an’ireo traboina tany Mahanoro ny Praiministra →
Tatitry ny asam-pampandrosoana ataon’ny Governemanta
11è réunion pour la consolidation de la paix